बाइबलका कथाहरू: सृष्टिदेखि जलप्रलयसम्म - यहोवाका साक्षीहरूको आधिकारिक वेब साइट
आकाश र पृथ्वी कहाँबाट आयो? घाम, जून अनि ताराहरूका साथै पृथ्वीमा भएका सबै थोक कसरी बन्यो? यी सबै परमेश्वरले बनाउनुभयो भनेर बाइबलले बताउँछ। त्यसैले, हाम्रो यो कथा किताब सृष्टिका कथाहरूबाट सुरु हुन्छ।
परमेश्वरले सबैभन्दा पहिला आफूजस्तै आत्मिक व्यक्तिहरू बनाउनुभयो। उनीहरूलाई स्वर्गदूत भनिन्छ। तर पृथ्वीचाहिं उहाँले हामी जस्ता मान्छेहरूका लागि बनाउनुभएको हो। त्यसपछि, परमेश्वरले पहिलो लोग्नेमान्छे अनि स्वास्नीमान्छे अर्थात् आदम र हव्वालाई बनाउनुभयो। उहाँले उनीहरूलाई सुन्दर बगैंचामा राख्नुभयो। तर परमेश्वरको कुरा नमानेको हुनाले उनीहरूले सधैंभरि बाँच्ने मौका पाएनन्।
परमेश्वरले आदमलाई बनाउनुभएको समयदेखि ठूलो जलप्रलयसम्म जम्माजम्मी १,६५६ वर्ष बित्यो। त्यतिबेला थुप्रै खराब व्यक्तिहरू देखा परे। माथि स्वर्गमा अदृश्य आत्मिक व्यक्ति अर्थात् शैतान र त्यसका खराब स्वर्गदूतहरू थिए। तल पृथ्वीमा चाहिं कयिन र अरू थुप्रै खराब मान्छेहरू थिए। उनीहरूमध्ये केही असाध्यै बलिया भए। तर पृथ्वीमा हाबिल, हनोक र नूह जस्ता असल मान्छेहरू पनि थिए। यी सबै मान्छे अनि घटनाबारे हामी भाग एकमा पढ्नेछौं।